Global Voices teny Malagasy » Mandrara Ny Lohahevitra ‘Tsy-Lazaina Fito’ Ny Governemanta Shinoa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Mey 2013 1:38 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fahalalahàna miteny, Fanabeazana, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Tanora, Zon'olombelona
Namoaka ny lisitry ny fady tsy azo resahina hafa i Zhang Xuezhong (張雪忠), izay mampianatra any amin'ny Oniversiten'ny siansa politika sy ny lalàna ao Shina Atsinanana  tamin'ny 10 May 2013 ka ireto izany: ny soatoavina manerantany, fiarahamonim-pirenena, zon'olompirenena, fahaleovantenan'ny fitsarana, fahalalahan'ny fanaovan-gazety, ny fahadisoana vitan'ny antoko komonista taloha ary ny saranga kapitalista iangarana manokana.
Ankoatra izay taty aoriana dia nasehon'ny fandraisana an-tsoratra “Eo amin'ny toe-draharahan'ny tontolo ara-ideolojia” (《關於當前意識形態領域情況的通報》)  navoakan'ny Birao Foibe Ankapoben'ny Antoko Komonista Shinoa tamin'ny 13 Mey 2013 fa nampidirina ho ao anatin'ny politikan'ny fanivanana ny hevi-bahoaka an-tserasera ny politikan'ny “Fito tsy fanonona”. Ny fihodinana farany nataon'ny governemanta hanenjanany ny fanaraha-maso ny kabary sy ny ideolojia dia niafara tamin'ny fanakatonana na fampiatoana ny kaontin'ireo manampahaizana liberaly maro sy ny fanohintohinana ara-politika ireo mpiaro ny zon'olombelona.
Na dia voafafa aza ny ankamaroan'ireo “Fito tsy fanonona”, nahaangona  sy namongatra indray ireo hafatra an-tserasera tratran'ny sivana tao amin'ny Google Plus i “Resaka Mamparikivy” (胡言兌）:
@Stariver: Tsy dia misy zavatra manokana momba ny “Fito tsy fanonona”. Tsy afa-miresaka momba ny soatoavina manerantany isika fa afa-miresaka momba ny faharatsian'ny teniko fe lehibe. Raha tsy afa-miresaka momba ny fahalalahan'ny fanaovan-gazety isika, afa-miresaka momba ny fifandraisana ampitaintsika amin'ny maso [tantara shinoa taloha momba ny fahalalaham-pitenenana ambanin'ny fanjakan'ny didiko fe lehibe]. Raha tsy afa-miresaka momba ny fiaraha-monim-pirenena isika, afa-miteny momba ny Fanjakan'ny Lanitra Taiping . Tsy mila miresaka momba ny zon'olompirenena isika, afa-miresaka ny zavatra iainan'ny fart-izen [olom-pirenena noverezin-jo]. Tsy miady hevitra momba ny fahadisoan'ny Antoko Komonista Shinoa isika fa afa-miresaka momba ny zava-bita hosoka ara-tantara. Raha tsy afaka miresaka momba ny “saranga kapitalista iangarana manokana” isika dia afaka mitafatafa momba ny “taranaka mena faharoa”. Raha voarara ny resaka fahaleovantenan'ny fitsarana, azontsika resahina avokoa ny tsiambaratelo maizin'ny rafi-pitsarantsika.
@Yu Pen: Ahoana moa ny itabatabantsika ny Dimy tsy azo atao  [naoty: ireto avy ny dimy tsy azo atao: aza manao rafitra ka antokon'olona maro isan-karazany no hitantana ao amin'ny fiholahana (ambadika); Aza manamaro isan-karazany torolalana ara-kevitra; aza “manasaraka ny fahefana telo” ary manangana rafitra roa loha; aza [mametraka rafitra] federaly; aza [mivarotra ny fanana-panjakana ho an'olo-tsotra.] ka hanaitra antsika ny “Fito tsy fanonona”? Aza mihevi-tena ho kely tsy hitan'ny olona. Rehefa mipoaka ny basy, tsy tokony hanonofy isika. Efa tara loatra isika ny hametraka tsipika raha efa nipoaka ny basy. Ny fihetsika rehetra aorian'ny toe-javatra dia ikendrena hamitahana olona.
Misy ny bilaogera shinoa sasany no namindra ny tafatafa any amin'ny Google Plus. Indreto ary ny fanehoan-kevitra teo noho eo ho setrin'ny hafatr'i lay bilaogera mavitrika Wen YunChao momba ilay fanapaha-kevitra politika.
@Shen Hongxing: Haha, naneho ny tena endriny ny [Filoha] Xi Jinping . Mitovy ihany izy sy i Bo Xilai  [Bo dia mpitarika ny Antoko Komonista Shinoa teo aloha izay nanindrahindra ny ideolojia Maoista].
“Angano ivelan'ny rindrina” (@墙外仙）nitandrina tamin'ny fampitan-kafatry ny  hevitr'i [zh] Zhang Xuezhong ao amin'ny Sina mba hihodinana amin'ny sivana:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/05/22/48602/
 Oniversiten'ny siansa politika sy ny lalàna ao Shina Atsinanana: http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%8E%E4%B8%9C%E6%94%BF%E6%B3%95%E5%A4%A7%E5%AD%A6
 “Eo amin'ny toe-draharahan'ny tontolo ara-ideolojia” (《關於當前意識形態領域情況的通報》): http://www.nytimes.com/2013/05/14/world/asia/chinese-leaders-warn-of-dangerous-western-values.html?_r=0
 Fanjakan'ny Lanitra Taiping: http://en.wikipedia.org/wiki/Taiping_Heavenly_Kingdom
 Dimy tsy azo atao: http://chinadigitaltimes.net/2013/03/sensitive-words-npc-shockers-and-disappointments/
 fampitan-kafatry ny: http://weibo.com/3206688870/zwMlV38I1